Idzo nyowani dzeNikeLab tambo dzeApple Tarisa pamwe chete neNike Air VaporMax Flyknit | Ndinobva mac
Idzo nyowani dzeNikeLab dzeApple Watch pamwe chete neNike Air VaporMax Flyknit
NikeLab inoramba ichitangisa zvigadzirwa zvitsva kana kuti sezvazviri mune ino tambo tambo yeApple Watch. Zvishoma pamwedzi wapfuura takaona yakatemwa yeApple yewachi pachayo paNike webhusaiti, hongu, wachi iri pachena yakafanana neyatinayo pawebhusaiti yeApple asi yakawedzera tambo nyowani kuchigadzirwa chisina kutengeswa zvakasiyana nhasi, unofanirwa kutenga wachi. Mune ino kesi isu takatarisana nekuburitswa kwemabhande matsva uye kwete wachi yese, nekudaro kubvumira vashandisi vechigadzirwa vane iyo nyowani shangu mavara kuti vanyatsoenderana.
Tiri kutaura nezve ina tambo dzemavara dzinogona kutengwa muchitoro cheNike online kana zvimwe zvitoro zvepanyama, kuti ubatanidze iwo matsva Nike Mhepo VaporMax Flyknit kubva paZuva kusvika Husiku muunganidzwa. Aya mabhande matsva ane mavara akasanganiswa nemitambo uye isu tatoyambira pane dzimwe nguva kuti isu takatarisana ne "fashoni" chigadzirwa uye mabhanhire ndiwo akakosha pfuma muApple chishandiso.
Pinki inobata machena, bhuruu uye yakajeka bhuruu, chena uye yakasviba bhuruu ndiwo mana mavara matsva anogona kusanganiswa zvakakwana neNike Air VaporMax Flyknit. Mune ino kesi mitengo iri $ 49 yeimwe neimwe yetambo nyowani uye iwo mateki anenge madhora zana nemakumi mapfumbamwe. Pasina kupokana, Nike iri kubheja pane iyi Apple Watch mune yayo yemitambo edition uye zvirokwazvo vashandisi vazhinji vanozogutsikana nemukana wekutenga mabhanhire uye kwete iyo wachi yese senge mumhando yakapihwa muna Kubvumbi wapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Idzo nyowani dzeNikeLab dzeApple Watch pamwe chete neNike Air VaporMax Flyknit
Nokia neApple vanova vabatsiri nekuda kwechibvumirano
Apple inobvisa maposta akafukidza zvemukati meApple Chitoro muSingapore